AGWALA NDI NCHE AKA IKE KA HA HAPỤ EKWEREMADỤ AKA – hoo!haa!!
AGWALA NDI NCHE AKA IKE KA HA HAPỤ EKWEREMADỤ AKA
Ụlọ omebe-iwu sineti agwala ndi nche ahụ gbara ebe obibi osote onye isi ụlọ omebe iwu ụlọ sineti, bụ Ike Ekweremadụ okirikiri ka ana achọ ya njide, n’Abụja, ka ha si n’ebe ahụ pụọ, ka nwa-amadị a nwee mmegharị ahụ.
Ọ bụ onye omebe iwu bụ sinetọ Chukwuma Ụtazi kpọlitere okwu a na ọgbakọ ndi omebe iwu a nwere onwe ha n’ụbọchị Tuusdee. Ọ sịrị na ụdị igba mmadụ okirikiri a agbara Ekweremadụ megidere ikikere o nwere iji megharị ahụ. Ọ sịrị na mgbe ya si Enugwu aga ọrụ n’Abụja n’isi ụtụtụ ahụ, na ụmụ ọrụ enyem-aka Ekweremadụ na-akpọ ya n’ekwe ntị were agwa ya ka ndi nche siri kpọchie ebe ọpụpụ na mbata ebe obibi Ekweremadụ nakwa ogbe ebe obibi ya ahụ, nke mere na onweghị onye nwere ike isi n’ụlọ Ekweremadụ pụta.
Ụtazị sịrị na rue mgbe ya na-ekwu okwu ahụ, na ọtụtụ ụmụ amala steeti Enugwu bi n’Abuja buru mmiri na-ezo n’ụtụtụ ahụ gaa na nke Ekweremadụ were na-eti mkpu ka enyere nwa-amadị a ohere ka o megharịa ahụ.
Ụtazị gara n’ihu jụọ sị, kedu ụdị arụ Ekweremadụ mere nke na-agaghị ekwe ndi ezi n’ụlọ ya ñụrụ mmiri tọgbọ iko n’ụdị a? Ọ sịrị na nke a na-ewute ndi mmadụ nke mere ha ji ajụ, ‘kedu ihe nwoke a mere?’
Mazị Ụtazị kwuru na ụfọdụ mmadụ na-ekwu n’ọbụ maka na ụfọdụ ndi otu ndọrọ-ndọrọ ọchịchị chọrọ ihapu otu nke ha baa otu ndọrọ-ndọrọ ọchịchị ọzọ ke ejighị chọọ ka Ekweremadụ bịa ọrụ ụbọchị ahụ.
Ọ kwukwara na ya nụrụ na ha achọkwughị ka onye isi ụlọ ọrụ omebe iwu n’onwe ya bịa ọrụ, ka owee bụrụ na isi ọgọdọ adịghị n’ebe ekere ye, mana o kenere Chukwu n’ihi na onye isi a mechara bịarute ụlọ ọrụ ya.
Yabụ onye omebe iwu a yọrọ ulọ omebe iwu ka ọ gwa ndi nche ka ha hapụ ebe obibi Ekweremadụ.
N’ịkwado okwu Mazị Ụtazị, onye omebe iwu bụ Sam Anyanwụ nke otu PDP, steeti Imo, sịrị na ụdị ihe a, na-aga n’ihụ ugbu a bụ ndi mmadụ ịkpacha anya na-adụ ọchịchị onye kwue uche ya aka n’ọnụ.
Ọ sịrị na rue mgbe ya na Ekweremadụ nọchara ụnyahụ, n’onweghị ozi ọbụla sitere n’aka ndi uwe ojii bịara Ekweremadụ. Were kwue na ọ gbagwojuru ya anya ka esi bịa gbaa ụlọ Ekweremadụ okirikiri n’ụdị a taa.
Ọ sịrị n’ ọbụrụ na onwere ka esiri chọọ ka Ekweremadụ bịa zara ọnụ ya, na ha ka-akpọ ya ka ọbịa. O kwukwara na Ekweremadụ aka jee ma zaa ụdị oku a.
Sam gwara onye isi ụlọ omebe uwu na ya nwere ntụkwasị obi n’ebe ya na Ekweremadụ nọ, n’ihi nke a, ọ sịrị na ha ga na-echekwa ebum n’obi ụlọ ọrụ omebe iwu.
N’okwu nke ya, onye omebe iwu bụ Imanuel Bwacha nke otu PDP steeti Taraba sịrị n’ụdị akparamagwa a abụghị naanị itụ ọchịchị onye kwue uche ya aka n’ihu kama n’ọbụ imegide ịdị n’otu ala anyị. Ọ sị na ha ga-akpachara anyị n’ihi na ụdị ihe a emebeghị n’ala anyị na mbụ. Ọ sị na ebe nke a hapụrụ ihe gbasara otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị wee megide ulọ omebe iwu, na ekpere dị mkpa maka ọnọdụ a.
Onye isi ụlọ omebe iwu sineti bụ Bukọla Saraki kwuru na n’otu aka ahụ, na ndi nche gbakwara ebe obibi ya okirikiri n’ime ụtụtụ ụbọchị Tuusdee. Ọ sịrị na-akpọrọ ya ka ya bịa hụ ndi uwe ojii maka ịza ajụjụ ole n’ole gbasara ori ahụ ezuru n’Ọfa n’ọnwa ole n’ole gara aga. Ọ sịrị na ya enwenwughị ike ime nke a. O kwukwara sị, na ọbụrụ na ya gara nke ndi uwe ojii ahụ, n’ụlọ omebe iwu aka nọrọ ka atụrụ na-enwegh onye nche ebe ọbụ na onye osote ya bụ Ekweremadụ nọ dịka onye aji eji ugbu a.
Ọ sịrị na ọbụ site na-enyem aka Chineke ka ya jiri bịarute ọrụ n’ụbọchị ahụ. Bụkọla sịrị na onye osote ya kpọrọ ya n’ekwe ntị iji gwa ya na ndi nche kwụchiri ya ụzọ. Saraki kwukwara na ndị nche kwụchikwara ọgbara ụgbọala ọrụ ya ụzọ.
Ka ihe si kwụrụ ugbu a, ndi ụlọ ọrụ omebe iwu sineti agaala ezumike kwa afọ ha. Ha ga-alọghachite ọrụ ma ọnwa itoolu n’afọ dị n’abalị iri abụọ na isii.
Previous Post: AGWALA NDI NCHE AKA IKE KA HA HAPỤ EKWEREMADỤ AKA
Next Post: MBAKA AGWALA BUHARI KA Ọ GAA ROM GA RỊỌ MGBAGHARA